डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रियो, अस्पताल जान मानेनन् – Health Post Nepal
२०७७ असोज ३ गते १८:५३
प्रधानमन्त्रीज्यू ! के हाम्रा स्वार्थविरुद्ध उभिने डा. केसीलाई ढाल्दिनै चाहेको हो ? उनी नभएको भए…
सरकारलाई चिकित्सक संघकाे ७२ घन्टे अल्टिमेटम, डा. केसीको माग पुरा नभए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी
स्वेच्छाचारी मुलुकमा पनि स्वास्थ्यमा यस्तो खेलबाड गरिँदैन
स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका साथै कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबिबिएस र एमडी अध्यापनको माग राख्दै अनशनरत चिकित्सक डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर बन्दै गएको छ। आमरण अनशनको छैठौं दिन उनको अवस्था नाजुक बन्दै गएको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिस्ठानले जनाएको छ।
स्वाथ्य अवस्था दैनिक बिग्रिँदै जाँदा पनि उनले जाँचका लागि अस्पताल जान मानेका छैनन्। प्रतिस्ठानका अनुसार हाल डा. केसीलाई कमजोर हुनुका साथै चच्कर लाग्ने र मांशपेसी बाउँडिने गरेका छन्।
यस्तै शुक्रबारको भन्दा आज केसीको मुटुको चालमा पनि गडबडी देखिएको छ। प्रेसर पनि कम हुँदै गएको र मध्यरातिदेखि पिसाबमा करिब दुईसय मिलिलिटर कम भएको प्रतिस्ठानले जनाएको छ।
प्रतिस्ठानका चिकित्सकद्वारा दिनपटक सामान्य जाँच भए पनि उनी अस्पताल जान मानेका छैनन्। साथै शरीर कमजोर बन्दै गएकाले चिकित्सकले सलाइन चढाउन आग्रह गरे पनि डा. केसीले सरकारले आफ्ना माग पूरा नगरेसम्म सलाइन पनि नलिने अडान लिएका छन्।
चिकित्सकहरूले रगतको मात्रा जाँच गर्न खोज्दा पनि उनले नमानेको प्रतिस्ठानले जारी गरेको डा। केसीको स्वास्थ्य अवस्थाबारे पत्रमा जनाइएको छ। प्रतिस्ठानले अहिलेकै अवस्था रहिरहे रगतमा चिनिको मात्रा अत्यन्त न्यून भइ शरीरका अन्य अंगहरुमासमेत असर पर्ने जनाएको छ।
साथै इलेक्ट्रोइड र एसीड बेसिक सन्तुलनमा गडबढी भइ अन्य अंगले काम गर्न नसक्ने र रोकप्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर भइ अन्य रोकको संक्रमणको जटिलता उत्पन्न हुने पनि प्रतिस्ठानले जनाएको छ। हाल अनशन बसेको ठाउँमा नियमित निरीक्षणका लागि कठिनाइ भएकाले उनलाई स्थानान्तरण गर्न पनि सुझाव दिइएको छ।
Tags: अनशन, डा.गोविन्द केसी